पैसा नभएर भोकै बस्नुपर्‍यो ! प्रहरीलाई कल गर्नुहोस् – Mero UK
पैसा नभएर भोकै बस्नुपर्‍यो ! प्रहरीलाई कल गर्नुहोस्
१६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा पैसा नभएर कोही भोको बस्नु परेको त छैन ? यदि त्यस्तो हो भने अब महानगरीय प्रहरी कार्यालयको आवश्यक समन्वयमा अभावमा बस्न बाध्य सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राहत वितरणका लागि विभिन्न बैंक तथा व्यवसायीसँग समन्वय थालिसकेको कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनले आफ्नै पहलमा आइतबारदेखि उक्त अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा २५८ जनालाई पुग्ने खाद्यान्न सङ्कलन भइसकेको र आज वितरण गरिने पोखरेलले बताए । मागका आधारमा तीनै जिल्लामा निःशुल्क राहत दिइने उनले बताए ।
मुलुकमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नस्निकन आदेश जारी गरेको आइतबार छैठौँ दिन हो । लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा चलाउने कामदार तथा विपन्न र गरिब परिवारमा समस्या बल्झिँदै छ । दैनिक दाताले दिएको सहयोगमा चल्ने आश्रम,
बिरामी फर्काउने अस्पताललाई सरकारको चेतावनी
सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क भाइजर बाँड्ने यी युवक